निर्मला हत्याकाण्डमा मुछिएका बम दिदीबहिनीले बल्ल मुख खोले (हेर्नुहोस् भिडियोसहित) — Sanchar Kendra
१गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा फेरि गुरुङ नै नियुक्त
२काठमाडौँ उपत्यकामा आज ३९२४ जनामा संक्रमण पुष्टि
३आज ९३०५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १६८ को मृत्यु
४कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न भकाभक किन पछि हट्दैछन काठमाडाैं उपत्यकाका ठुला अस्पताल ? यस्तो छ कारण
५फेरि गयो ५.८ म्याग्नीच्यूडको शक्तिशाली भूकम्पको धक्का, कहाँ हो केन्द्रबिन्दु ?
६कोरोनालाई जित्नुभयो ? अब अनिवार्य ध्यानमा राख्नुहोस् यी कुरा र भुलेर पनि कहिले नगर्नुहोस यी गल्ति
७घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
८नयाँ सरकार गठनका लागि बाबुराम भट्टराईले राखे यस्तो प्रस्ताव
९नेपालका अस्पतालमा सकियो अक्सिजन, शय्यामा छट्पटाउँदै बिरामी
१०नर्सको प्रशंसा गर्दै राष्ट्रपतिले गरिन् यस्तो ट्वीट, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल
११आमाको मुख हेर्ने दिनमा सासुआमा सिता दाहालको फोटो राख्दै बिना मगरले किन लेखिन यस्तो स्टाटस, यस्तो छ कारण
१२अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा जेठ १७ गतेसम्म प्रतिबन्ध
निर्मला हत्याकाण्डमा मुछिएका बम दिदीबहिनीले बल्ल मुख खोले (हेर्नुहोस् भिडियोसहित)
कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तका बलात्कारी–हत्यारालाई कारवाहीको लागि सडक–सदन र मिडियाका पानापाना रंगिए तर पनि अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । दशैंअघि नै आफ्नी छोरीका हत्यारालाई कारवाही हुने निर्मलाका आमाबुबाको अपेक्षा पूरा हुन सकेन ।
हत्यामा संलग्न हुन सक्ने भन्दै सबैले चोरऔला उठाएका बम दिदीबहिनी सार्वजनिक रुपमा देखिएकी छन् । लामो समयसम्म कतै नदेखिएकी निर्मलाकी साथी रोशनीसँगै उनकी दिदी बबिताले आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएकी छन् । दुबै बहिनीहरुले आफूमाथि अन्यय भएको भन्दै न्याय मागेकी छन् ।
कसैले सोध्दै नसोधी आफूहरुमाथि विभिन्न आरोप लगाएका बताएकी छन् । दुबै बहिनीले आफूहरुलाई समाजमा मुख देखाउन नसक्ने गरी मिडियाले प्रचार गरेको आरोप लगाएकी छन् ।
घटनापछि आफूहरु मामा घर गएको बबिताले बताइन् । आफूहरुलाई घरमा बस्ने नसक्ने वातावरण भएपछि आफूहरु मामा घर भएकी बताइन् । रोशनीले आफूहरुमाथि पनि प्रहरीले छानविन गरेको भन्दै दोषी भए कारवाही गर्नु पर्ने बताइन् । उनले आफूलाई दोषी पुष्टि नगरी विभिन्न आरोप लगाएर अन्याय भएको बताइन् ।
बबिताले सरकारी प्रतिवेदन झुट भएको बताएकी छन् । आफूहरुसँग नसोधिएका कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका समेत उनले बताएकी छन् । उनले अाफूलाई ट्यूशन पढ्न नगएको भन्ने अारोपको पनि खण्डन गरेकी छन् । बबिताले ट्युसन सेन्टरमा गएर बुझ्न चेतावनी समेत दिएकी छन् । त्यसैगरी डान्स सिक्न कहिलै नगएको समेत बताएकी छन् । अाफूहरुलाई प्रहरी सुरक्षा दिएको भन्ने कुरा पनि झुटो भएको बताएकी छन् ।
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा फेरि गुरुङ नै नियुक्त
नयाँ सरकार गठनका लागि बाबुराम भट्टराईले राखे यस्तो प्रस्ताव